နေအိမ် / ဆားဘီးယားအနုညာတစီရင် / Metal VM က J.S. V ကို. JANINA (ARB / 01/11) - Awards
အတွင်းခုံသမာဓိဆု သတ္တု VM က J.S. v. Janina စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကိုဆိုဗိုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်တရားရုံးကပြန်ဆိုခံရဖို့ပထမဦးဆုံးချီးမြှင့်ခဲ့.
ဤသည်ခုံသမာဓိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အရောင်းစာချုပ်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောအငြင်းပွားမှုသက်ဆိုင်ရာ 2009 သတ္တု VM ကများအကြား (တစ်ဦးဆားဗီးကော်ပိုရေးရှင်း) နှင့် Janina (တစ်ဦးကိုဆိုဗိုကော်ပိုရေးရှင်း) ဗဟိုအပူပေးစနစ်အတွက်အသုံးပြုမှလျှပ်စစ်ဘွိုင်လာနှင့် ပတ်သက်..
တစ်ခုချင်းစီကိုဘွိုင်လာများအတွက်သဘောတူညီခဲ့စျေးနှုန်း€ခဲ့သည် 260,00. တောင်းဆိုသူ (ရောင်းချသူ) မေလအတွက်ဘွိုင်လာပို့စတင်, သြဂုတ်လအတွင်းက, ငွေပေးချေမှုများအတွက်အသိပေးစာကိုစေလွှတ်. ဖြေဆိုသူအဆိုပါပါတီများနှုတ်ငွေပေးချေမှုဘဏ်အကောင့်မှာသို့မဟုတ်အရေးဆိုသူမှအစားထိုးကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေလုပ်လိမ့်မည်ဟုသဘောတူညီခဲ့သည်ဟု replied.
တွင် 2011, €၏ပမာဏအတွက်လျော်ကြေးများအတွက်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကိုဆိုဗိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာအနုညာတစီရင်၏အမြဲတမ်းခုံရုံးမတိုင်မီခုံသမာဓိများအတွက်တင်သွင်းတောင်းဆိုသူ 26.000,00.
ပဌမ, ဘဝါးခုံသမာဓိ၏ကိုဆိုဗိုအနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများနှင့်အညီအရေးဆိုမှုအပေါ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုထောကျပငျ့ 2011, ကအငြင်းပွားမှုဟာခုံသမာဓိဖို့ပါတီများအကြားအရောင်းစာချုပ်ထဲကထကြကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြီးကတည်းက.
အဆိုပါတန်ရာတွင်, ဘဝါးခုံသမာဓိကိုဆိုဗိုဥပဒေအထူးစာချုပ်အဖြစ်အရောင်းစာချုပ်ဖော်ပြသောကျင်းပနှင့်, ဒီအတိုင်းတော့, ကသာအရေးအသားထဲမှာပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပါသည်. ထိုကွောငျ့, အဆိုပါပါတီများ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်နှင့်ဖွဲ့မဟုတ်လျှင်နှုတ် လုပ်. မဆိုပြုပြင်မွမ်းမံအကျုံးမစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်. အဆိုပါခုံရုံးအရှင်ပါးစပ်ပြင်ဆင်ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားမရနိုငျသောအုပ်ချုပ်.
ရလဒ်အနေဖြင့်, ဘဝါးခုံသမာဓိအဆိုပါတောင်းဆိုသူတွေရဲ့မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာပြစ်ဒဏ်များ၏ငွေပေးချေမှုခွင့်ပြု. ဘဝါးခုံသမာဓိပြစ်ဒဏ်များဇူလိုင်လကနေတွက်ချက်ခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထား 21, 2011, အဆိုပါတောင်းဆိုသူခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုများ၏တင်သည့်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်အနုညာတစီရင်၏အမြဲတမ်းခုံရုံးမတိုင်မီ၎င်း၏တောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းသည့်အခါရက်စွဲအရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါခုံရုံးအရှင်တောင်းဆိုသူ€ပမာဏကိုပေးချေတုံ့ပြန်အမိန့်ထုတ် 26.000,00, အဖြစ်ကောင်းစွာ€အဖြစ် 1.900,00 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်.